Semalt: Maxay Muhiimadu utahay SEO?
Waa maxay Maadooyinka?
Nuxurka iyo SEO: Xiriirka
Abuurista Waxyaabaha La Kordhiyey
Tayo-siinta waxyaabaha la abuuray
Qorayaasha Qoraalka ee Semalt Waxay Bixiyaan Mashiinka Raadinta ee ku Fiican Waxyaabaha La Helo
Nuxurka waa boqorka.
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay weedhan marar badan, laakiin weligaa isku dayday inaad ogaato sababta ay ugu yeedhaan waxa ku jira boqorka.
Sababta oo ah waxa ku jira ayaa leh awood ay ku xoojiso qiimeynta websaydhka 'SERPs' bogagga Natiijada Mashiinka Raadinta).
Hagaag, waa dhinaca ifaya. Haddii ay jiraan cillad ka kooban waxa ku jira, waxay soo jiidan kartaa ganaaxyada Google waxayna ka saari kartaa shabakaddaada horyaalnimada.
Maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad fahanto waxa ka kooban, SEO, sababta maadada ay muhiim ugu tahay SEO, waxaad sameyn karto si kor loogu qaado tayada maadada, iyo waxbadan.
Qeybta ugu dambeysa waxaa sidoo kale ku jira xal lama filaan ah oo kaa caawin kara waxyaabahaaga inaad ka gudubto tartamayaasha oo aad darajo sare ugu kacdo natiijooyinka raadinta.
Nuxurku waa qayb kasta oo macluumaad ujeedo leh oo aad daawadayaasha ugu soo bandhigto kanaal. Macluumaadkani wuxuu noqon karaa wax kasta iyo qaab kasta.
Waxay noqon kartaa qoraal, muuqaal, fiidiyo, GIF, webinar, fiidiyoow toos ah, ama wax kasta oo ku jira websaydh, kanaalka warbaahinta bulshada, codsi (shabakad iyo mobiil), ama meel kale.
Si aad u hesho faham fiican, arag qeexitaannada ka kooban kuwan in ka badan 40 khubaro ku ah warshadaha Suuqgeynta Dijital ah.
SEO (Kordhinta Mashiinka Raadinta) waa geedi socodka kor loogu qaadayo tayada iyo tirada taraafikada dabiiciga ah ee websaydhkaaga ku helo makiinadaha raadinta.
Haddii, sida milkiile kasta oo websaydh ah, ujeedadaadu sidoo kale waa inaad ku meelayso shabakadaada booska ugu sareeya ee bogagga SERPs (Bogagga Natiijada Mashiinka Raadinta), SEO ayaa kaa caawin doona.
Maanta, SEO waxay ku tiirsan tahay Google. Marka, ha isku khaldin haddii qof u yabooho inuu ku hagaajiyo bartaada internetka sida ku cad Google.
Si aad wax badan uga baratid SEO, mabda'aheeda shaqo, noocyadeeda, iyo waxyaabaha kale ee la xiriira, waxaad u gudubtaa tilmaam-hoosaadka SEO-gu ee loogu talagalay bilowgayaasha Semalt.
Ujeeddada mashiin kasta oo raadinaya waa inuu siiyaa natiijooyin la xiriira oo waxtar leh sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. Laakiin sidee bay u aqoonsadaan inay natiijooyinku habboon yihiin oo waxtar leeyihiin?
Hagaag, waxaa jira algorithms-ka si loo ogaado haddii natiijooyinka ay u jiheyn karaan isticmaaleyaasha nuxurka qiimaha leh iyo in kale. Marka matoorada raadinta ay cadeeyaan in qeyb kooban oo ka mid ah ay bixin karto qiimaha ugu badan, iyaga ayaa ugu horreeya.
Raadinta Mashiinka Raadinta Mashiinka
Mashiinka baarista ee ku jira waxyaabaha la hagaajiyay, ama waxyaabaha aadka u sarreeya, waa qeyb ka mid ah matoorada raadinta macluumaadka ee la aqoonsan yahay inuu siin lahaa qiimo baarayaasha. Waxyaabaha ay ka koobantahay sida ugu fiican ee ku saleysan qalabka mashiinka raadinta marka hore.
Ka soo qaad inaad ku bilowdid raadinta alaabada ku habboon eco-wejiga Google. Wax ka yar hal ilbidhiqsi, liistada ayaa ka soo muuqan doonta shaashadaada oo ay kujiraan natiijooyin laxiriira oo waxtar leh.
Natiijada ugu horeysa ee liiskaan waxaa kujira inta ugu badan mashiinka raadinta.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin Mawduuca Raadinta Raadinta
Aqoonsiga iyo kor u qaadista qaybaha kala duwan ee tusmada waxay go aansadaan inay u sarreyso natiijada natiijooyinka raadinta iyo in kale.
Halkan waxaa ah qaybaha aasaasiga ah ee mashiin kasta oo goobitaan ah oo ku habboon waxyaabaha ku habboon:
Markaad daryeesho qaybahaan, matoorada raadinta ayaa u aqoonsan doona waxyaabahaaga inay yihiin kuwo qiimo leh oo ay marka hore kala horreeyaan. Aynu mid mid u fahamno.
Macluumaadku waa xaqiiqo ku saabsan qof ama shay aad rabto inaad siiso dhagaystayaashaada. Waxay noqon kartaa qaab tafaasiil ah, tirooyin, tilmaamo, talo, hagitaan, ama wax kasta oo aad damacsan tahay inaad dhiibto.
Hubso in macluumaadka aad bixiso ay sax tahay oo uusan jahwareerin dhagaystayaashaada.
Ujeeddadu waa sababta loo diro macluumaadkan. Waxay noqon kartaa inaad wax barato, wargeliso, naftaada ka dhigto mid caan ah, ganacsigaaga soo bandhigo, ama wax kaleba. Ujeeddadu sidoo kale waxay ku lug leedahay waxaad ka filayso ka dib markaad siiso macluumaadkaas dhagaystayaasha.
Hubso inaad u naqshadeyso macluumadka qaab ay ula xiriirto dhagaystayaasha isla markaana fulisa ujeedooyinkaaga.
Dhageysigu waa qofka laga filayo ama koox dad ah oo aad rabto inaad hesho macluumaadka. Bartilmaameedsiga dhagaystayaasha saxda ah waxay kaa caawineysaa inaad dejiso waxyaabo sida faahfaahinta, codka, iyo muuqaalka macluumaadka aad jeceshahay inaad bixiso.
Aqoonso bartilmaameedkaaga bartilmaameedka, baahiyahooda, dhibaatooyinka ay wajahayaan, iyo su'aalaha ay waydiin karaan markay hellaan macluumaadkaaga. Kusoo dhaji nuxurka udhexeeya dhagaystayaashaada, ma ahan wax kale.
Foomku waa muuqaalkii ugu dambeeyay ee macluumaadka markaad u soo bandhigto dhagaystayaashaada. Soo ogow sida dhageystayaashaada bartilmaameedka ah ay ugu fahmi doonaan sida ugu fiican - qaab qoraalka, muuqaalka, maqalka, ama fiidiyaha.
Marka hore, go aansada nooca ay ka kooban tahay - mid wargelin ah, shucuureed, halis ah, ama kaftan ah. Kadib dooro sida aad u rabto inaad soo bandhigto.
Kanaalka ayaa ah midka xogtaada gaarsiiso dhagaystayaasha. Waxay noqon kartaa degel internet ah, baloog internet ah, baraha bulshada, barnaamij moobiil, telefishan, joornaal, ama waxkasta oo sifiican ula xiriiri kara bartilmaameedkaaga.
Hubso in nuxurkaaga laga heli karo kanaalada halka bartilmaameedkaagu yahay waqtiga ugu badan.
Waxyaabaha la hagaajiyey waa lama huraan maxaa yeelay waxay ka caawin doontaa websaydhkaaga inuu heerkiisu sareeyo bogagga natiijada mashiinka raadinta. Waxay sidoo kale hagaajin doontaa aragtidaada internetka.
In kasta oo la abuurayo waxyaabaha la isku habeeyey, iska hubi in ay xudun u tahay baahiyaha dhageystayaashaada, iyo dhamaan waxyaabaha ka kooban mashiinka raadinta waxyaabaha ku habeysan waxaa loo daryeelaa si hufan.
Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhowr arrimood oo farsamo sida keywords, URL-yada, sharraxaadda meta, cinwaannada meta, iyo kuwa kale.
Waxaa jira dhowr tillaabo oo qof walba uu u baahan yahay inuu raaco iyadoo la abuurayo waxyaabo tayo sare leh. Waxay kala yihiin:
1. Cilmi baarista ereyga
Cilmi baarista ereyga furaha ayaa ah waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso maxaa yeelay kaliya ereyada furaha ah ee saxda ah waxay xaqiijinayaan in waxaaga ku jira lagu heli karo natiijooyinka raadinta.
Markaad daraasad sameyneyso, iskuday inaad ka fogaato ereyada muhiimka ah ee tartamaya oo door bidhaama ereyada-dabada-dheer. Waxaad sidoo kale ku caawin kartaa qalab waxtar leh oo cilmi baaris keyword ah, sida Keyword Planner oo ka socda Google.
2. Dhameystir Mawduuca
Kadib xulashada ereyada furaha ah ee saxda ah, waa inaad gabagabeeysaa mawduuca nuxurkaaga. Darajada sare, waa lama huraan inaad mawduucaaga la mid noqoto eraygaaga furaha ah. Si kale haddii loo dhigo, mawduucaagu waa inuu lahaadaa erayga muhiimka ah.
3. Abuur Muuqaal
Hadda, waa inaad abuurtaa qeexitaan waxa ay ka koobnaan doonaan dhammaan waxyaabaha ay ka koobnaan doonaan. Go'aan ka gaar cinwaanka, meeqa meelood oo ka yar oo hoosaadyo ah, muuqaalo, iyo inta ereyo ah.
4. Ka dhig Si dhib yar loo Akhrin karo
Ka dhig nuxurkaaga mid si fudud loo akhrin karo adigoo u kala baxa cutubyo yar-yar oo 1-2 ah. Ku dar muuqaal / cinwaan hoosaad ah ka dib ere kasta 150-250.
Akhristayaashu waqti aad u yar ayey ku qaataan websaydhka. Haddii aysan u arkin wax xiise leh inay ku dhegaan, way bixi doonaan.
5. Ha ka leexin Mawduuca
Markaad curineysid nuxurka, ku dheji mawduuca. Khasab maahan in lagu daro wax walba hal shey oo ka kooban hal shey. Diiradda saar mawduuca oo iskuday inaad ka dhigto mid waxtar leh.
6. Ku dheji bartilmaameedka Bartilmaameedka
Nuxurkaagu waa inuu udub dhexaad u ahaado bartilmaameedkaaga. Haddii aad rabto inaad ka dhigato nuxurkaaga koowaad inuu ku xirnaado, ku dheji eraygaaga bartilmaameedka oo ha bartilmaamedin ereyo-fure badan.
7. Ku dar xiriiriyeyaasha
Mashiinnada raadinta waxay aqoonsan yihiin in waxyaabahaagu ay yihiin kuwo la aamini karo marka ay ku jiraan xiriirro la xiriira websaydhyada habboon, la isku halleyn karo, iyo kuwa awoodda leh. Hubso in ereyada aad u isticmaasho sameynta xiriirin xiriir la leh goobta hagaha.
Tusaale ahaan, fiiri xiriiriyaha hoose ee ku jira ereyga 'hagaha SEO ee bilowga ah.' Markaad gujiso xiriirintan, waxay ku wareejin doontaa websaydhka Semalt, halkaas oo aad ka heli doonto wax la mid ah oo ku xusan xiriirkan.
Kor u qaadista waxyaabaha la abuuray waxay ka dhigan tahay inaad galayso dhinaca farsamada ee kobcinta nuxurka.
Waxaa ka mid ah wanaajinta waxyaabaha soo socda:
Aan mid mid u fahanto:
Qaabka URL-ka bogga waa waxa ugu horeeya ee adeegsadayaashu arkaan. Haddii URL-ka uusan ku jirin ereyga muhiimka ah ee la xiriira, fursadaha ayaa ah adeegsadayaasha inaysan soo booqan karin bartaada.
URL-ka dahsoon iyo kuwa dheer ayaa had iyo jeer cabsi geliya dadka isticmaala, oo waxay ka gaagaan inay guji xiriirinta. Fahmaan seddexdan xiriiriye ee hoos ku xusan:
https://semalt.com/fullseo - Adeegsadayaasha ayaa isla fahansan in xiriirkani uu dib ugu celin doono bogga websaydhka Semalt ee ka kooban macluumaad ku saabsan FullSEO. Kama labalaabi doonaan inay guji.
https://www.nytimes.com macluumaadka la xiriira SEO.
http://www.baystreet.ca/viewarticle.aspx?id=588707 - Isticmaalayaashu ma fahmin waxa isku xirkaan uu kusaabsan yahay. Marka, way ka labalabeeyaan inay guji.
Cinwaanka cinwaanku waa cinwaan (la dhajin karo) oo aad ku aragtid natiijooyinka raadinta. Waxay ka caawiyaan Google, iyo matoorada raadinta kale, inay fahmaan waxa ku jira.
Astaamaha cinwaanka sidoo kale waa go’aaminta goorta adeegsadayaashu ay dooranayaan natiijooyinka raadinta ugu habboon. Tixgeli afarta waxyaalood ee muhiimka ah adiga oo wanaajinaya sumadaha cinwaanka:
Ahaw qof qeexan inta aad abuureyso sumadda cinwaanka.
Ha ku buuxinin sumadda cinwaanka leh furayaal badan.
Hubso in aysan dhaafin 60 xaraf.
Furaha bartilmaameedka waa inuu ahaadaa bilowga.
Qoraal yar oo qoraal ah oo aad ku aragto hoosta cinwaanka sumadda / cinwaan la riixi karo iyo URL waxaa loo yaqaan sharraxa Meta.
Sharaxaad meta ah oo macno leh iyo aaladda dhibic ee ay ka kooban tahay erayga bartilmaameedka ayaa soo jiidata riixyo badan. Tixgeli seddexdan waxyaalood oo muhiim ah adiga oo wanaajinaya sharaxaadda meta:
Hubso in qoraalka qoraalkiisu ka yar yahay 160 xaraf.
Ka dhig qoraal kooban gunaanad kooban oo gaar ah oo ka kooban waxa ku jira.
Ku dar ereyga bartilmaameedka ah iyo ereyada furaha ah ee habboon.
Maqaalkani wuxuu sharxay sababta maadada ay muhiim ugu tahay SEO iyo waxa aad sameyn karto oo dhan si aad u abuurto mashiinka raadinta waxyaabaha ku habboon.
Ka waran haddii waxaas oo dhan iyo kuwa intaa ka badan ee qorayaasha qorayaasha ahi ay sameeyaan?
Khabiirada qorayaasha qorayaasha ah ee Semalt ma aha oo kaliya inay daryeelaan nuxurkaaga laakiin sidoo kale waxay hubiyaan inay dusha ka saaraan liiska natiijooyinka raadinta Google ayna abuuraan xiisaha isticmaale.
Ganacsi kasto ama milkiile websaydh wuxuu ubaahanyahay waxa kujira bogagga, dhajinta blogga, aaladaha warbaahinta bulshada, sida loo tilmaamo, iyo kuwa kale.
Haddii ay shaqaaleeyaan qoraha-qoraha waqtiga-buuxa, isaga / iyada waxaa laga yaabaa inaysan ku habboonayn miisaaniyadooda. Iyo, xirfad-yaqaanku wuxuu qaadan karaa waqti badan si uu u abuuro waxyaabo.
Waxay ku abuurtaa jahwareer maskaxda inta badan ganacsatada ama milkiilayaasha websaydhka, mana fahmaan waxa la sameeyo.
Hagaag, xaaladdu maahan in la jahwareero laakiin waa in laga fikiraa xalka / Semalt. Khabiirada qorayaasha qorayaasha ah ee Semalt waxay hubiyaan in dhamaan waxyaabaha aad ka kooban tahay loo baahan yahay in si taxadar leh loo daryeelo.
Mararka qaarkood adoo is-hagaajinaya waxa ku jira, dadka ayaa sameeya khaladaad yar-yar oo saameeya darajadooda websaydhka si weyn. Si looga fogaado khibradahaas oo kale, waa inaad qorto khabiirada qorayaasha Semalt.
Semalt + Maaddooyin tayo sare leh = Waxaad hodan ku ahaan doontaa.